विषयवस्तुहरू र आइकन प्याकहरूको साथ तपाईंको आईफोन निजीकृत गर्नुहोस् [VIDEO] | आईफोन समाचार
आईओएस १ of को आगमनको साथ आईफोन अनुकूलनको "बूम" थोरै विघटन भएको देखिन्छ, तथापि, अघिल्लो कुनै पनि विधिहरूले आईफोन समाचारका सदस्यहरूलाई विश्वस्त तुल्याएन। त्यसकारण हामीले भेट्टाएसम्म हामीले आराम गरेनौं निश्चित तरीका तपाईको आईफोन निजीकृत गर्न को लागी।
यस ट्यूटोरियलको साथ हामी तपाईंलाई आइकन प्याकहरू र विषयवस्तुहरू कसरी स्थापना गर्ने भनेर देखाउँदछौं तपाईंको आईफोन पूर्ण रूपमा अनुकूलन गर्न, यसलाई अद्वितीय बनाउने। यो सब भन्दा मूल र विशेष तरीका हो यसैले कि तपाईंको आईफोन अरूको जस्तो मिल्दैन, तपाईं कुन हदसम्म कल्पना गर्न सक्नुहुन्न।
तपाईको आईफोनलाई कस्टमाइज गर्नका लागि तपाईले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको «मोलोको» एप्लिकेसन, एक हल्का र पूर्ण नि: शुल्क अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुपर्दछ जुन तपाईं यो लिंकमा आईओएस अनुप्रयोग स्टोरमा खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। एकचोटि हामीले यसलाई डाउनलोड र स्थापना गरेपछि सजिलो हुन्छ:
मोलोको अनुप्रयोग खोल्नुहोस् र तपाईंलाई सबैभन्दा मनपर्ने आइकन थिमहरू ब्राउज गर्नुहोस्। त्यस शीर्षकको लागि ट्याब खोल्न "प्राप्त गर्नुहोस्" बटन थिच्नुहोस्।
यसले हामीलाई नेटिभ अनुप्रयोगहरू र तेस्रो-पार्टी अनुप्रयोगहरूको आइकन प्याक देखाउँदछ। पहिले नेटिभ अनुप्रयोगहरू छान्नुहोस् र "डाउनलोड" थिच्नुहोस्।
सफारी खुल्नेछ र सूचित गर्नेछौं कि हामी "प्रोफाइल" डाउनलोड गर्न गइरहेका छौं। "अनुमति दिनुहोस्" बटन क्लिक गर्नुहोस् र डाउनलोड गर्न अगाडि बढ्नुहोस्।
हामी सफारीबाट बाहिर निस्कन्छौं र "सेटिंग्स" अनुप्रयोगमा जान्छौं। शीर्षमा यसले स that्केत गर्दछ कि हामीले एउटा प्रोफाइल डाउनलोड गरेको छ, त्यसैले हामी प्रविष्ट र स्थापना मा क्लिक गर्नुहोस्
हामी तेस्रो-पक्ष अनुप्रयोगहरूको आइकन प्याकको साथ कार्य दोहोर्याउँदछौं
अब हामी देख्नेछौं कि कसरी आइकनहरू प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो आईफोनको स्टार्ट मेनूमा देखिन्छन्। ती अनुप्रयोगहरूसँग अनुरूप जुन हामीले स्थापना गरेका छैनौं त्यसले कार्य गर्दैन, त्यसैले हामी तिनीहरूलाई समाप्त गर्न सक्दछौं साधारण तरिकामा। स्थापित अनुप्रयोगहरूसँग सम्बन्धित आईकनहरू तिनीहरूलाई छिटो खोल्नेछ। यो सजिलो हुन सक्दैन र तपाईंको आईफोन पूर्ण रूपमा निजीकृत।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » विषयवस्तुहरू र आइकन प्याकहरूको साथ तपाईंको आईफोन निजीकृत गर्नुहोस् [VIDEO]
र म यो कसरी चाहान्छु यदि म यसलाई अधिक चाहन्न भने? किनभने अनुप्रयोग छोड्छ तर अनुप्रयोगहरू सेल फोनमा रहन्छन्
प्रोफाइल मेट्नुहोस् र सबै कुरा हटाईनेछ।
सेटिंग्स / सामान्य / प्रोफाइल
प्रोफाइल अनुमति दिनुहुन्छ? र नि: शुल्क? ठट्टा होइन ...
LG लाई जवाफ दिनुहोस्
यसले तिनीहरूलाई परिवर्तन गर्दैन, यसले तिनीहरूलाई प्रतिलिपि गर्दछ र तपाईंसँग 93889237382298374 XNUMX XNUMX २XNUMX२XNUMX आइकनहरू छन् ...